Iindlela ezi-7 zokuLungiselela ukuTshintsha kweNtengiso kwi-Intanethi | Martech Zone
Iindlela ezi-7 zokuLungiselela ukuTshintsha kweNtengiso kwi-Intanethi
NgoMvulo, Februwari 1, 2016 NgoMvulo, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Baninzi abathengisi abaxhalabise kakhulu ngokwanda kwezithuthi kwiindawo zabo endaweni yokuguqula ukugcwala kwabo banazo. Iindwendwe zifika kwindawo yakho yonke imihla. Bayazazi iimveliso zakho, banohlahlo-lwabiwo mali, kwaye bakulungele ukuthenga… kodwa awubahendi ngomnikelo abafuna ukuguqula.
Kwesi sikhokelo, UBrian Downard we-Eliv8 ibonisa inyathelo ngenyathelo ukuba ungayakha njani ifanele yokuthengisa onokuyisebenzisa ukwandisa amandla okukhula kweshishini lakho usebenzisa ifomula yamanyathelo asi-7.
Imveliso / iMakethi yeFit -Qinisekisa ukuba imveliso oyithengisayo ilingana nabaphulaphuli ojolise kubo.
Khetha uMthombo wakho weTrafikhi -Chonga owona mthombo wokugcwala kwaye uqhube ngakumbi ukugcwala kule mithombo.
I-Magnet ehamba phambili -Nikezela ngesithembiso esingathintelekiyo onokuthi usinike umthengi wakho SIMAHLA ngokutshintshela ulwazi lwabo loqhakamshelwano.
Uhambo lwengcingo -Nikezela ngesibonelelo esingenakuphikiswa, esinika itikiti eliphantsi kakhulu (ngesiqhelo phakathi kwe- $ 1 kunye ne- $ 20) esetyenziselwa ukuguqula izikhokelo zibe kubathengi.
Unikezelo olungundoqo -Ngoku ukuba unenguquko, yanda kwaye unikele ngeMveliso engundoqo okanye iNkonzo.
I-Maximizer inzuzo -Bonelela umthwalo iiphakheji eziphezulu kunye nezisezantsi zemida yezinto kunye.
Buyisela iNdlela -Zisa abathengi abangathengi kwakhona kwi-funnel yakho ngokumisela amanqaku okuchukumisa kunye nabo kwi-intanethi.
tags: UBrian Downardukuguqulwa kokusebenzaumnikelo ongundoqoI-ELIV8yandisa utshintshoumlenzekufanelekile kwintengisoyokuthengisaimveliso kufanelekileukuthengisa imvelisoinzuzo enkulubuyela umendoimithombo yezithuthiucingo lohambo
Blitz: UkuSebenza kunye noVavanyo loMthwalo kwiLifu
Iindleko zokulinganisa ukuHanjiswa kokuHanjiswa namaxabiso e-inbox